အမိုက်စား ကောက်ကြောင်းအလှတွေကိုပေါ်လွင်စေတဲ့ မြန်မာဝတ်စုံလေးနဲ့ အလှကြီးလှနေတဲ့ အိချောပို – GuGuGarGar
ချောမောပြီး အပြစ်ဆိုစရာမရှိတဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့ ဂစ်တာရှိတ်လေးလို လှပတဲ့ ကောက်ကြောင်းအလှကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မင်းသမီးလေး အိချောပိုကို လူကြီး၊ လူငယ်မရွေး အားပေးကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အိချောပိုက ရုပ်ရည်ချောမောရုံ သာမကပဲ သရုပ်ဆောင်လည်း ကောင်းမွန်တာကြောင့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး တော်တော်များများမှာ နေရာယူထားနိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အိချောပို သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတိုင်းကလည်း လူကြိုက်များပြီး အောင်မြင်မှု အထိုက်အလျောက်ရရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။
အိချောပို က ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေ ရိုက်ကူးနေသလို သူမပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေရဲ့ Red Carpet Show တွေကို အချိန်ပေး တက်ရောက်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အိချောပိုက မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီလ (၃) ရက်နေ့မှာတော့ ရန်ကုန်မြို့ သမ္မတ ရုပ်ရှင်ရုံမှာ ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ “ပလေယာ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရဲ့ Red Carpet Show ကို တက်ရောက်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အိချောပို ကတော့ ကောက်ကြောင်းအလှကို ပေါ်လွင်စေတဲ့ မြန်မာဝတ်စုံလေးဝတ်ပြီး အရမ်းလှနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း အိချောပိုရဲ့ ပုံရိပ်တွေကို သဘောကျကြမယ် ထင်ပါတယ်။ အိချောပိုကတော့ တကယ့်ကို မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အလှနဲ့ ပြီးပြည့်စုံသူလေး ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း အိချောပိုရဲ့ အလှအောက်မှာ နစ်မြောသွားမယ် ထင်ပါတယ်။ အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိသတ်ကြီးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Source: Ei Chaw Po’s fb. Photo: Kaung Si Thu & Yell Lin Naing (My Studio)
ခြောမောပွီး အပွဈဆိုစရာမရှိတဲ့ မကျြနှာလေးနဲ့ ဂဈတာရှိတျလေးလို လှပတဲ့ ကောကျကွောငျးအလှကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ မငျးသမီးလေး အိခြောပိုကို လူကွီး၊ လူငယျမရှေး အားပေးကွတာ ဖွဈပါတယျ။ အိခြောပိုက ရုပျရညျခြောမောရုံ သာမကပဲ သရုပျဆောငျလညျး ကောငျးမှနျတာကွောငျ့ ရုပျရှငျဇာတျကားကွီး တျောတျောမြားမြားမှာ နရောယူထားနိုငျတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ အိခြောပို သရုပျဆောငျထားတဲ့ ရုပျရှငျဇာတျကားတိုငျးကလညျး လူကွိုကျမြားပွီး အောငျမွငျမှု အထိုကျအလြောကျရရှိတာကို တှရေ့ပါတယျ။
အိခြောပို က ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးတှေ ရိုကျကူးနသေလို သူမပါဝငျသရုပျဆောငျထားတဲ့ ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးတှရေဲ့ Red Carpet Show တှကေို အခြိနျပေး တကျရောကျနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ အိခြောပိုက မနကေ့ ဖဖေျောဝါရီလ (၃) ရကျနမှေ့ာတော့ ရနျကုနျမွို့ သမ်မတ ရုပျရှငျရုံမှာ ကငျြးပပွုလုပျတဲ့ “ပလယော” ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးရဲ့ Red Carpet Show ကို တကျရောကျခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
အိခြောပို ကတော့ ကောကျကွောငျးအလှကို ပျေါလှငျစတေဲ့ မွနျမာဝတျစုံလေးဝတျပွီး အရမျးလှနတော ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီးလညျး အိခြောပိုရဲ့ ပုံရိပျတှကေို သဘောကကြွမယျ ထငျပါတယျ။ အိခြောပိုကတော့ တကယျ့ကို မိနျးကလေးတဈယောကျရဲ့ အလှနဲ့ ပွီးပွညျ့စုံသူလေး ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီးလညျး အိခြောပိုရဲ့ အလှအောကျမှာ နဈမွောသှားမယျ ထငျပါတယျ။ အခြိနျပေးပွီး ဖတျရှုပေးတဲ့ ပရိသတျကွီးကို ကြေးဇူးတငျပါတယျ။ Source: Ei Chaw Po’s fb. Photo: Kaung Si Thu & Yell Lin Naing (My Studio)